15L hop tank, China 15L hop tank vagadziri, vatengesi, fekitori - NingBo COFF Machinery Co., ltd
15L hop tangi
Chitarisiko chakanaka, chakanakira mutyairi system michina.It inogona kuiswa yakananga pamusoro petangi yekuvirisa. yakaderera mutengo
- Chitarisiko chakanaka, chakanakira mutyairi system michina
- Inogona kuiswa yakananga pamusoro petangi yekuvirisa
- Chimiro:Ф300 * 440
- Iine oxygenated interface
- Diaphragm-chisimbiso kumanikidza geji
- Pazasi utsanana vharuvhu batanidzo
Yakagadzwa muNingbo, China, Coff inotungamira inogadzira inogadzira chinwiwa michina. Kuunganidzwa kwedu kunosanganisira asi hakusi kungogumira kudoro rekubikira, mudziyo wekuvirisa, yakajeka tangi tangi, HLT & CLT, CIP ngoro, grist hopper, hop kumashure, chigayo, nezvimwe.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kukumbira rumwe ruzivo nezvezvigadzirwa zvekubika, ndapota inzwa wakasununguka kutaurirana nesu. Isu tichave tiri vanopfuura vanofara kubatsira bhizinesi rako.